सिंगापुरमा को–को भारतीय नेता भेटे ओलीले ? – JanaSanchar.com
सिंगापुरमा को–को भारतीय नेता भेटे ओलीले ?
संबाददाता : मोनिका गुरुङ	प्रकाशित मिति: (२०७३ भाद्र १९, आईतवार) १८:३५
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरमा भारतीय अधिकारीहरुसँग गोप्य रुपमा भेटवार्ता गरेका छन् । उनले भारतीय नेता, विश्लेषक र गुप्चर एजेन्सीका अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उपचारका क्रममा सिंगापुर पुगेका ओलीले गोप्य रुपमा भारतीय अधिकारीहरुलाई भेटेको ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल भारत मामिलाका जानकार भारतीय प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र एस्डी मुनी र अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । नेपालमा भारतसँग जोडिएको राजनीतिक तिक्तता आउँदा भारतीय विश्लेषक मुनीले सिंगापुरमा नेपाली नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने गरेका छन् । यसअघि नेपालविज्ञ भारतीय प्राध्यापक मुनीको पहलमा एमाओवादी अध्यक्षका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । मुनी एक प्राप्य सिंगापुरमा रहँदै आएका छन् ।
जवाहर नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक मुनी नेपालसम्बन्धी विद्यावारिधी हुन । मुनी एक सिंगापुर विश्वविद्यालयमा साउथ एसियन डिपार्टमेन्ट (दक्षिण एशियाली विभाग)का प्रमुखका रुपमा समेत रही सकेका छन् । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटवार्ता गरेको पक्का हो’ कुन समयमा कसरी भेट भयो भन्ने कुरा अहिले बताउने बेला भएको छैन’ स्रोतले भन्यो ।
सिंगापुरबाट फर्केपछि ओलीले संविधान संसोधनका विषयमा अग्रसरता लिने बताइएको छ । भेटमा भारतसँगको सम्बन्ध नजानिदो तरिकाले बिग्रीएको ओलीले स्वीकार गरेको भारतीइ एक अधिकारीले बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सिंगापुरमा भारतीय कुनै पनि नेतालाई नभेटेको बताएका छन् ।
(२०७३ भाद्र १९, आईतवार) १८:३५ मा प्रकाशित